Waa Maxay Tartanka Ka Dhex Bilowday UEFA Iyo FIFA Yeyse Saamayn Kartaa Arintani? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa damacsan qorshe ay ku doonayaan in ay kaga hor tagaan FIFA si ay saamayntooda kooxaha Yurub u sii wataan kadib markii uu xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA balaadhin ku sameeyay koobka FIFA Club World Cup.
UEFA ayaa la ogaaday in ay wadaan qorshe ay doonayaan in ay ku sameeyeen tartan cusub oo qaabka Champions League oo kale ah kaas oo la ciyaari doono waqtiga xagaaga ee xili ciyaareedyadu fasaxa yihiin.
Waxay arintani dagaal kubbada cagta ah ka dhex abuuri kartaa UEFA iyo FIFA maadaama oo cida tartamadooda ka qayb qaadanaysaa ay yihiin kooxaha Yurub ugu waa wayn.
Sanadkii la soo dhaafay waxa uu xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ku dhawaaqay in ay balaadhin wayn ku sameeyeen koobka kooxaha aduunka ee Club World Cup kaas oo ay ka soo qayb gali doonaan kooxo intii hore ka badan isla markaana qaabkiisii hore la badalay.
Laakiin UEFA ayaa go’aankan kaga jawaabaysa in ay samayso tartan cusub oo qaabka Champions League oo kale ah kaas oo ay kooxaha waa wayn ee Yurub ku dagaalami doonaan inta lagu jiro fasaxa xagaaga ee labada xili ciyaareed dhexdooda.
Waxay UEFA soo dhawaysay tartanka saaxiibtinimo ee xili ciyaareed kasta ka hor la ciyaaro kaas oo loo yaqaan International Champions Cup, waana koob saaxiibtinimo oo kooxaha Yurub iyo Maraykanka ugu waa wayni ay waqtiga xagaaga kulamo xiiso badan ku ciyaaraan.
Waxaa International Champions Cup qabta qabta Relevent Sports kuwaas oo guul wayn ka gaadhay in ay kooxaha ugu waa wayn xagaaga kasta tartankan saaxiibtinimo ka qayb galiyaan, waxaana hadda la ogaaday in UEFA ay doonayso sidii ay tartankan ugu badali lahayd mid qaabka Champions League oo kale ah.
Haddii ay UEFA ku guulaysato in ay koobka saaxiibtinimo ee International Champions Cup u dhigaan qaabka Champions League oo kale isla markaana ay waqtiga fasaxa xagaaga qabtaan waxa uu noqon karaa mid sidii hore ka xiiso badan oo ay FIFA ugaga cadhaysiin karaan balaadhintii ayna raalida ka ahayn ee lagu sameeyay Club World Cup.
FIFA ayaa haddaba shaacisay in koobka kooxaha aduunka ee Club World Cup laga dhigay 24 kooxood laakiin qorshaha UEFA ayaa sidoo kale noqon kara mid xaaladiisa abuuri kara.
Kooxaha Liverpool , Man United, Man City, Arsenal , Chelsea iyo Tottenham oo dhamaantood qayb ka soo ahaa koobka saaxiibtinimo ee IC Cupka ayaa la sheegay in ay xiiso u muujiyeen qorshaha UEFA ay ku horumarinayso IC Cupka ee waliba qaabka Champions League oo kale loogu samaynayo.
Waxaa koobka IC Cupka lagu soo qabtay North America, Australia, China, Europe iyo Singapore waxaana ka soo qayb galayay dhamaan kooxaha kubbada cagta ugu waa wayn waxayna hadda u muuqataa in guulihii koobkan saaxiibtinimo laga soo gaadhay uu UEFA xiiso galiyay.
Ma jiraan wax dalab ah oo ku aadan Arsenal oo lala xiriirinayo Aouar & Barcelona ma aysan soo bandhigin dalab Depay ah sida ay sheegtay Lyon